मेरो बन्दाबन्दी डायरी! – SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ ब्लग / विचार ∕ मेरो बन्दाबन्दी डायरी!
मेरो बन्दाबन्दी डायरी!
सिन्धु खबर साउन २०, २०७७ गते १९:३८ मा प्रकाशित
राता ती रङ्गीन गुराँसले छापिएका हरिया पर्वतको खोंचबाट सुर्योदय हुदैं यसका पहेंला झिल्काले यस कलिलिन प्रकृतिका सेता फेटा बानेका हिमाल चम्कदा यस सुकोमल धरातलको बहुरंगी चराचुरुंगीको चिरविर आवाजमा गुनगुनाउदै मा यस सुनौली बिहानीमा निवन्ध लेख्न बसें । जीवनश्रोत सधैं एउटै भेंगलामा बग्दो रहेनछ स्जीवनयात्रा सधैं सरल रेखामा हिंड्दो रहेनछस जीवनमा बसन्तको मनोरम हरियाली मात्र होइन वर्षाका काल घटनाहरु पनि आउँदा रहेछनस अनि जीवनलाई दुस्ख र वेदनाले ढपक्क ढाक्दो रहेछ । मानिसको जीवनमा विभिन्न रूपमा विविध किसिमका संकटहरु देखापर्ने गर्छन । ति संकटहरु मध्ये एक भयानक किसिमको संकट हो “ कोरोना भाइरस महामारी ” , जसको कारण बिश्व त्रसित छ ।त्यस्तै यसबाट नेपाल अछुतो रहने त कुरा नै भएन । कोरोना भाइरसको महामारी फैलन नदिन नेपाल बन्दाबंदीको अवस्थामा छ ।
देश अनुसारकै भेष भनेझैं महामारीको यस प्रतिकुल अवस्थामा आफ्नो जीवन सहज रूपमा व्यतित गर्न आवश्यक छ । मानिसले आफ्नो दैनिकी कसरी विताउँछ भन्ने कुरा उसको परिवेश र उ बस्ने धरातलमा निर्भर गर्छ । म ग्रामिण भेगमा बसोबास गर्ने भएकोले मेरो दैनिकी कृषिसँग अछुतो रहने कुरै भएन । मनमा कोरोनाको त्रास भएपनि खेतीपातीमा परिवारलाई सहयोग गर्न पाउनुको सन्तुष्टि भने पक्कै छाएको छ । कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै देखेर मनमा उत्पन्न भएको त्रासलाई भुलाउन साथीभाईसँग मनोरन्जन गर्दै यस बन्दाबंदी समय बित्दै छ ।
बिद्यार्थीहरुले एसइई पछि आफु केहि स्वतन्त्र भएको अनुभव गर्छन । त्यसका साथै उनीहरुको आआफ्ना योजना पनि हुन्छन । त्यस्तै मेरो पनि आफ्नो इच्छा र योजना थियो ।एसइई पछि खाली समयमा मनोरंजन अनि घुमफिर गर्ने योजना बनेका थिएँ । त्यसका साथै उक्त समयको सदुपयोग गर्न कम्प्युटर सिक्ने र मेरो अंग्रेजी सुधारका लागि सहायक कक्षा लिने योजना थियो । तर कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि गरिएको देशव्यापी बन्दाबन्दीको कारणले एसइई को नतिजा आउने समयमा एसइई नहुने खबर आउँदा म लगायत सम्पुर्ण बिद्यार्थी साथीहरुको योजनामा प्रतिकुल असर परेको छ । मैले योजना अनुसार अंग्रेजी सहायक कक्षा लिन नसकेकोले मेरो आगामी शिक्षामा पनि प्रभाव पार्ने छ ।
यो बन्दाबन्दीको कारणले सम्पूर्ण व्यक्ति धनि गरिब सर्वसाधारण देखि लिएर ठुला ठुला नेता सम्मको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । त्यस्तै गरि मेरो जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । त्यस्तै गरि मेरो जीवनशैली पनि त्यसबाट अछुतो रहेन कुरै भएन । पहिले पढाइ र मोबाइलमा तिप्त रहने म अहिले बाल्यकालका खेलहरु जस्तैः गुच्चा, गट्टा, खर, आदिमा व्यस्त रहन थालेको छु । कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेट लिनका लागि भएपनि समाचार सुन्ने बानी बसेको छ । रचनात्मक तथा सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धि कार्य तर्फ अग्रसर हुदैं गएको छु जस्तैः चित्रकला , कवितालेखन, नृत्य इत्यादि । महामारीबाट बच्न व्यक्तिगत सरसफाईमा बढि ध्यान दिन थालेको छु र कृषिकार्यमा बढि संलग्न हुन थालेको छु ।
‘आफु नमरी स्वर्ग देखिन्न’ भनेझैं दुःख र पिडाको वास्तविकताको अनुभूति सुनेर मात्र होइन देखेर र भोगेर मात्र थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने शास्वत सत्यको बोध मलाई भइरहेको छ । जीवनका हरेको क्षणमा सहजता मात्र हुन्छ भन्ने होइन कुनै समय धैर्यता र साहसले पनि जीवनचक्र बन्छन भन्ने कुराको अनुभूति मलाई यस बन्दाबन्दीमा भएको छ । म लगायत मेरो परिवारले साथै व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान पनि दिने नै छौं र अति आवश्यक पनि छ । मलाई आशा छ, मानवजातिले यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट छिट्टै मुक्ति पाउने छ र जीवन पहिले जस्तै सरल र सहज बन्ने छ ।